Kedu otu onye odeakụkọ Georgia si hụ onye ahọpụtara UNWTO bụ Zurab Pololikashvili maka Secretary General?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Kedu otu onye odeakụkọ Georgia si hụ onye ahọpụtara UNWTO bụ Zurab Pololikashvili maka Secretary General?
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Georgia • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye edemede nke Report Diligence na UNWTO Nominee Zurab Pololikashvili bụ ndị nyocha banyere ọdịdị ala nke nwere njikọ siri ike na mba Georgia. Ọ bụrụ na enwere ile mmadụ anya n'ihu na akụkọ a, mgbe ahụ ọ bụ nchegbu na nkwanye ùgwù maka ndị Georgia. Maka nke a naanị, ọ bụghị maka ndị ode akwụkwọ imebi ohere nwa akwụkwọ Georgia, Zurab Pololikashvili, ka ọ ghara ịbụ onye odeakwụkwọ General UNWTO nke Georgia. Na tiori, mmepe dị otu a ga adị mma na Georgia. ma ma ọ bụrụ na a hoputara nwa akwukwo na Georgia n'okpuru dubious ma ọ bụ ọbụna remotely mie ala ọnọdụ, mgbe ahụ, mba Georgia nwere akwa ida.
N'ihi mmasị gọọmentị Georgia nwere na ntuli aka a na ọtụtụ ndị na-akwado Pololikashvili, ndị dere akụkọ a etinyela nnukwu ihe ize ndụ n'ịchịkọta ya. Georgia bụ obere obodo. Anyị nwere ihe egwu dị egwu na mgbapụta site na ibipụta nke a. Ihe mere anyị ji họrọ ịga n'ihu bụ n'ihi na nghọtahie ndị a kọwara ebe a nwere ike imerụ obodo ahụ ahụ n'isi-obodo ahụ Pololikashvili jeela nke ọma. Ihe ịga nke ọma bụkwa ọganihu nke mba ndị na-emepe emepe nke na-adabere na njem nleta ọ bụghị naanị maka uru akụ na ụba kamakwa maka ọganihu na mmụba ha niile.
Nke a abụghị nke onwe. Ndị dere akụkọ a nwere Zurab Pololikashvili nke ọma. O nweghị ụdị ọrụ ọ ga-arụ n’obodo Jọjia. Ikike ya na ngalaba ọha na nke ọha emeela ka ọ ghara ịdị mkpa na gọọmentị atọ ikpeazụ nke Georgia.
N'ime izu isii a gbara ajụjụ ọnụ, ọ nweghị onye nwere ihe ọ bụla na-adịghị mma ikwu banyere Zurab. Ọbụna ndị na-emegide iwu ya, ndị otu akwụkwọ akụkọ na-agba akwụkwọ n'ụlọ akụ ahụ o nyeere aka rụọ, enweghị ihe ọjọọ ọ bụla ikwu banyere ya. (Lee akụkụ ikpeazụ)
N'ihi Nkwenye siri ike na UNWTO Nominee Zurab Pololikashvili
Ihe ndị a bụ akụkọ banyere ọrụ Zurab Pololikashvili dị ka onye a họpụtara maka odeakwụkwọ ukwu nke United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), enweghị nghọta, iguzosi ike n'ezi ihe, na ịza ajụjụ site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị otu ọ bụla na mkpọsa ahụ, ọdịda nke usoro ihe niile na ndu nke mere ka ọ mee. A chịkọtara akụkọ a n’ime izu isii gara aga. Ọ pụtaghị ịbụ akụkọ zuru oke nke ndị egwuregwu niile na mmejọ ha na usoro ntuli aka. Kama nke ahụ, anyị ga-eleba anya na usoro nhọpụta emezighị emezi, ndị ahọpụtara, ihe mehiere na ihe kpatara ya
Na May 12th, 2017, Zurab Pololikashvili (amụrụ na Jenụwarị 12th, 1977, na Tbilisi, Georgia) ka UNWTO Executive Council họpụtara maka ọkwa nke Secretary General maka 2018-2021. E mere nnọkọ nke iri na ise na Madrid, Spain, ebe ọ na-eje ozi dị ka onye nnọchi anya mba Georgia.
Kemgbe ụwa, a na-ahọpụta onye ahọpụtara. Ma obu dika UNWTO tinye ya, "Nkwado nke UNWTO Executive Council ga-edozi na 22 nke UNWTO General Assembly na-abịanụ maka nkwado (September 11-16)th, 2017, Chengdu, China). "
Ma afọ nke gara aga akụkọ ihe mere eme nwere ike ọ gaghị ekpebi nsonaazụ ikpeazụ. Pololikashvili ga-anata 2/3 nke votu iji merie. Ọ na-akwụsịkwa ịtụkwasị obi ngwa ngwa.
A na-ezube ntuli aka maka odeakwụkwọ ukwu UNWTO ka ọ bụrụ ntuli aka nke ndị mmadụ nwere ahụmịhe kachasị nwee mmeri. Kama nke a, usoro a bụ nke FIFA-esc backroom na-achị, ihu ọma na mkparịta ụka dị n'etiti mba dị iche iche ọ bụghị site na ahụmịhe na iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị ọ bụla ga-aga ime. N'ihi ya, ndị nnọchi anya mpaghara ndị njem na-arịwanye elu banyere iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro a dum.
Enwere ọtụtụ ihe ga-eme ka usoro a ghara imebi ọdịmma mba. Ma obu dika UNWTO n'onwe ya tinye ya:
“Taa, azụmahịa nke ime njem nleta karịrị ma ọ bụ karịa nke mbupụ mmanụ, ihe oriri ma ọ bụ ụgbọala. Njem nleta abụrụla otu n'ime ndị isi na azụmaahịa mba ụwa ma na-anọchite n'otu oge otu n'ime isi mmalite ego ọtụtụ mba na-emepe emepe. Ọganihu a zuru ụwa ọnụ na steeti ndị mepere emepe na mba ndị mepere emepe abawanyela uru akụ na ụba na ọrụ n'ọtụtụ ngalaba metụtara ya — site na ụlọ gaa n'ọrụ ugbo ma ọ bụ nkwukọrịta. nke njem nlegharị anya na ọdịmma akụ na ụba na-adabere na ogo na ego nke njem njem na-enye. UNWTO na enyere ndi ozo aka n’onodu ha n’inwe ajuju n’ime ahia mba na nke mba ozo. Dị ka ụlọ ọrụ UN raara onwe ha nye maka njem nleta, UNWTO gosipụtara na mba ndị ka na-emepe emepe ga-erite uru site na njem njegharị na-aga n'ihu ma rụọ ọrụ iji nyere aka mee nke a.
N'ihi nke a, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị nnọchi anya si mba dị iche iche ugbu a amalitela ịgba mgbaghara na ikwesị ntụkwasị obi nke usoro nhọpụta. Anyị kwenyere na ìhè anyanwụ bụ ọgwụ kacha egbu egbu.
Ebumnuche nke akụkọ a bụ iji mee ka a mata ma weta nghọta na usoro anyị kwenyere na emebila. Ebumnobi nke akụkọ a bụ ọ bụghị ibuso ma ọ bụ wakpo onye ọ bụla mana ikpughe mmejọ na sistemu UNWTO n'ozuzu yana ihe dị ka ọdịda na enweghị ele mmadụ anya n'ihu nke usoro ntuli aka niile.
Ndị nnọchi anya mba niile ga-enwe ohere ikpeazụ ịhọrọ ma ọ bụ jụ Zurab Pololikashvili dịka onye isi nke “ụwa kasị ukwuu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ azụmahịa. ” O di nwute na uzo ozo di ka nsogbu.
Walter Mzembi nke Zimbabwe eduola ebubo a megide Pololikashvili, na-ebe akwa, na-ebo ebubo nrụrụ aka, na-achọ mgbanwe na nyocha ọha na eze. O di nwute na Mzembi bukwa onye ozo biara na ebe nke abuo. Ọ bụ onye a kacha ele mmadụ anya n’ihu -ekwe omume nwa akwukwo, n’agbanyeghi nke a o mebela onwe ya “ndi mmegide” ozo.
Ọdịda nke Sistem
Ọ bụrụ na a họpụta ya, Zurab Pololikashvili ga-eme ọfụma odeakwụkwọ ukwu UNWTO. Gini mere, ị nwere ike ịjụ, Pololikashvili bụ isi okwu nke akụkọ a maka ọdịda nke iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro ntuli aka UNTWO?
Ọ bụghị ihe Pololikashvili mere, ma ihe o mere ọ bụghị mee. Ewezuga mkpebi ya dị oke esemokwu iji weta ndị otu UNWTO otu ndị isi na egwuregwu Real Madrid rere (ọ nwetara tiketi niile) n'oge nzukọ na-aga n'ihu na Mee 10th, Pololikashvili emeghị mkpọsa n'ihu ọha maka ọnọdụ nke enwere ike ịhọpụta ya n'oge na-adịghị anya. Kama ndị otu gọọmentị Georgia, Mịnịsta Ala na Mịnịstrị nke Mba Ofesi na-agbachitere ya. Ọ bụghị nanị Georgia na-eme ya.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla nke tinyere onye ga-eme nke ọma mere mkpọsa ya n’obodo dị iche iche — dị ka mba ọ bụghị dị ka onye ndoro-ndoro ochichi kwesịrị ya. Ọtụtụ mba ndị ọzọ mara ikpe na-ezoro ezo na ndị na-ese okwu. Ndaba ahụ dị n'ime sistemu n'ozuzu ya na onye ndu ya.
Zurab Pololikashvili kacha njọ bụ na ọ meriri nhọpụta ahụ. O mere nke a na-ekwughi okwu UNWTO otu oge. Ewezuga akwụkwọ ọcha a kpọtụrụ aha n'okpuru, o nweghị ikpe maka ahụmịhe ya ma ọ bụ amụma ya n'ọdịnihu. Ọ bụghị naanị na nke a na-emebi iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro ahụ, ọ dịkwa oke nlezianya. Ọ na - ezigara ndị mmadụ ozi na - ezighi ezi maka ọdịnihu na mba ha na - anọchite anya ya.
Banyere ndị dere akụkọ a, Pololikashvili jụrụ ọtụtụ mbọ maka ajụjụ ọnụ. Ọ jụrụ ozi ịntanetị ma jụ ịza ma ọ bụ kwụnye ekwentị mgbe anyị nwara ịkpọtụrụ ya, mgbe ọ nabatara mkparịta ụka na mbụ. Ikekwe ihe kasị na-akụda mmụọ bụ nzaghachi mbụ ya mgbe mbụ anyị rịọrọ ajụjụ ọnụ:
Ọ gwara anyị ka anyị chere ruo mgbe ọ ga-enweta ntuli aka.
Ọ bụghị naanị anyị. Pololikashvili enyeghị otu ogbako ogbako, kama onye odeakwụkwọ ukwu ugbu a bụ Dr. Taleb Rifai kwuru maka ya, dị ka praịm minista Georgia, Giorgi Kvirikashvili. Nza ajụjụ bụ omume ọma nke ekwesịrị ịchọrọ maka onye isi nke otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa. Nke a agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ahụ choro ileghara mgbasa ozi anya. Ma Pololikashvili emebighị iwu ọ bụla ma ọ bụ iwu UNWTO site na ịjụ ịgwa ndị mgbasa ozi okwu. Ọzọkwa Pololikashvili kachasị njọ bụ ihe o mere ọ bụghị ime.
N'ikpeazụ, onye ndu UNWTO ugbu a kwesịrị ịza ajụjụ. Enwere ọtụtụ n'ime ha: Abulfas Garaye, Mịnịsta nke Omenala na njem nleta nke Azerbaijan-mba na-achịwanye n'ike n'ike nke gbachiri Georgia aka ma nwee ezigbo mmekọrịta mmekọrịta mba na mba - bụ onye isi oche nke kansụl na Madrid mgbe a họpụtara Pololikashvili. Odeakwụkwọ General UNWTO ugbu a bụ Dr. Taleb Rifai ga-apụ buru ibu a. Ọ nwere ike ịkọwapụta ihe nketa ya.
N'okpuru ebe a bụ akụkọ ndụ Zurab Pololikashvili site na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya ya: http://spain.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=SPA&sec_id=269. Ka ọ dị na August 31st, 2017, akụkọ ndụ a adịghị n'asụsụ Bekee ma depụta weebụsaịtị ahụ "na ọnọdụ melite."
Mgbe ị na-atụle ọdịiche dị n'etiti nke a na akụkọ ndụ (n'okpuru) nyefere UNWTO na esemokwu metụtara enweghị nghọta na nhoputa Pololikashvili enwere ihe mere a ga-eji kwenye na "mmelite a" abụghị ihe ndabakọ.
N'oge ọ bụla, a machibidoro ndị dere akụkọ a, ya na ọtụtụ ndị odeakụkọ ndị ọzọ na-enyocha okwu a ịchụso ozi, ọkachasị n'ihe gbasara njem nleta njem Pololikashvili, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ọ bụla.
Ihe ngosi A: Site na http://spain.mfa.gov.ge/
Onye nnochite anya Extraordinary na Plenipotentiary nke Georgia na Alaeze nke Spain, Onye isi nke Andorra, ndị Democratic Democratic Republic of Algeria na Alaeze nke Morocco, Onye nnọchi anya na-adịgide adịgide nke Georgia na World Tourism Organisation (WTO)
Kemgbe Eprel 15, 2012 Onye nnochite anya Extraordinary na Plenipotentiary nke Georgia na Alaeze Spain
2009 - 2010 Mịnịsta nke Economic Development nke Georgia
AHPH IN N'IME NKPIVRIV OZI
Onye ọrụ nnochite anya Pololikashvili na ahụmịhe nke ụlọ ọrụ nkeonwe gụnyere ọtụtụ afọ na ngalaba ego na ụlọ akụ, na-eje ozi dị ka onye isi nke International Operations na ụlọ ọrụ “TBC Bank” (otu n'ime ụlọ akụ kacha ewu ewu na Georgia). Onye isi nke Central Branch nke "TBC Bank" (2001-2005) na Onye isi oche nke TBC Group (2010-2011).
Na 2011-2011, onye nnochite anya Pololikashvili bụ onye isi njikwa nke FC Dinamo de Tbilisi, ndị otu egwuregwu bọọlụ kachasị ama na Georgia.
2008-2009 Global Senior Management Programme (GSMP), IE Business School, Instituto de Empresa, Madrid, Spain
1994-1998 Degree na Banking, Teknụzụ Mahadum Georgia, Tbilisi, Georgia
Ofbọchị ọmụmụ Jenụwarị 12, 1977, Tbilisi, Georgia
Di na umu ato
Georgian (nwa afọ)
Bekee, Spanish na Russian (Fluent)
French, Japanese na Polish (asụ)
IHE: Pololikashvili na ndị na-achọ nhoputa ya ewerela nnukwu nzere ọkachamara ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee nwaa ijikọ ha na mpaghara ndị njem. N'ezie, onye a họpụtara maka odeakwụkwọ ukwu WTO enweghị ihe ọ bụla na-arụ ọrụ njem. Kama Onye isi ala Georgia na ndị isi ndị ọzọ mere mkpọsa na-ezighi ezi maka ya.
Pololikashvili emeghị mgbalị ọ bụla iji mee mkpọsa n'onwe ya. N'ezie, o zere ime otú ahụ. Ọ jụla ikwu okwu n'ọgbakọ nzukọ nke otu nzukọ ahụ, nke ọ ga-abụ n'oge na-adịghị anya na-elekọta ma na-ahụ maka ya.
Atụmatụ nke mkpọsa Pololikashvili abụrụla ere nnukwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya (na nkeonwe ya) nwere ahụmahụ na gọọmentị atọ ikpeazụ nke Georgia dị ka ahụmịhe na mpaghara ndị njem. Nke a bụ naanị arụmụka ogige Pololikashvili mere maka ihe kpatara o ji bụrụ odeakwụkwọ ukwu nke ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa maka afọ anọ sochirinụ.
Ọ bụ ezie na enweghị ike ịkatọ ahụmịhe ọkachamara ya na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụ ụgha ịkpọ ya ọkachamara na njem na ikike ọ bụla. Ọ na-atụgharị uche na nke kachasị mma na nke na-enweghị isi na nke kacha njọ.
N'okpuru bụ ihe ụfọdụ si White Paper na ogige Pololikashvili (nke ọ dị ka ọ nwere obere aka) ewepụtara na UNWTO:
Site n'iji ya atụnyere ihe ihe ndekọ ndụ a dị n'elu site na weebụsaịtị ya dị ka onye nnọchi anya Georgia na Spain, ebe okwu "njem nleta" pụtara naanị ozugbo (n'aha aha WTO ya), na ihe ndị dị n'okpuru site na White Paper, mmadụ nwere ike ịhụ ebe etinyere "nzere" ndị njem. (na nkwuwa okwu) n'ime ederede ahụ wee jikọtara ya na ọnọdụ ya n'ọtụtụ afọ. Ngosipụta B bụ nnukwu ọrụ nke akụkọ ifo
Onye nnochite anya POLOLIKASHVILI nwere ahụmihe sara mbara nke ịrụ ọrụ na ngalaba nzuzo na nke ọha na ọkwa dị elu. O nwere ahụmahụ dị ukwuu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ebe ọ nọchitere anya Georgia na World Tourism Organisation (UNWTO), yana ije ozi dị ka onye nnọchi anya Extraordinary na Plenipotentiary na Alaeze nke Spain. Ọ nọkwa n'ọkwa onye osote Mịnịsta Ofesi na 2005 ruo 2006.
Ọnọdụ ugbu a
Dika onye Minista nke Economic Development of Georgia, onye nnochite anya Pololikashvili bu onye lebara anya na atumatu ego gbasara ego nke mba a ogologo oge, maka ikwalite ahia ahia mba ofesi na atumatu ego, yana maka ịkwalite mmepe nke njem, akụrụngwa na njem. O nyeere aka n'iwepụta atumatu ohuru maka mmepe nke njem nleta na Georgia, na-ebute ụzọ nke gọọmentị na nke ụlọ ọrụ nzuzo.
N'oge onye nnọchi anya Pololikashvili dị ka Mịnịsta nke Economic Development, site na isi mgbanwe mgbanwe amụma, ọrụ ire ahịa, mmelite nke akụrụngwa na nnwere onwe maka nnwere onwe visa, Georgia jisiri ike belata ọnụọgụ kwa afọ nke ndị mbata mba ụwa, site na 1.5 nde (na 2009) gafee akara nde 2.8 site na 2011.
Mgbanwe ndị ahụ meghere ụzọ maka omume njegharị na Georgia na atụmatụ mbelata ịda ogbenye, na-etinye Georgia n'etiti ndị njem kachasị njem na mpaghara ahụ.
Minista Pololikashvili nwere ihe ịga nke ọma duru usoro nnwere onwe akụ na ụba, na-ewebata atumatu nkwado ndị ọzọ maka SMEs, yana mmemme agbamume iji dọta ego ndị mba ọzọ maka mmepe nke akụrụngwa siri ike ma dịkwa nro.
2005 - 2006 Deputy Minister of Foreign Affairs nke Georgia. N’ọnọdụ a dị ka onye osote Mịnịsta nke okwu Ofesi nke Georgia, ọ lekọtara ngalaba maka nhazi, mmefu ego, ego na nnọkọ ndị dịịrị anyị, yana Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ Ndị Mmadụ.
Ahụmahụ nkeonwe oru.
Ahụmịhe nke ndị nnọchi anya onye nnọchi anya gọọmentị Pololikashvili gụnyere ọtụtụ afọ na ngalaba ego na akụ, na-eje ozi dị ka onye njikwa nke International Operations maka TBC Bank (otu n'ime ụlọ akụ kacha nwee isi na Georgia), Director nke TBC Bank's Central Branch Office (2001-2005) na Onye isi oche nke TBC Group (2010 - 2011).
Na 2001 - 2011 Onye nnochite anya Pololikashvili bụ onye isi nke FC Dinamo Tbilisi, ndị otu egwuregwu bọọlụ ọkachamara na Georgia.
A Zaghị Ajụjụ Ndị A
(N'agbanyeghị ọtụtụ mbọ ị kpọtụrụ onye ahọpụtara). Anyị na-anabatakwa azịza ya.)
Na August 25th, ndị na-aga ime obodo na ndị mmadụ n'otu n'otu sitere na ndị nnọchi anya gọọmentị na-anọchite anya mba ndị otu UNWTO 90 gbakọtara na Madrid iji tụfuo Mgbakọ General na-abịanụ na Chengdu, China, na ịtụle otu esi azaghachi esemokwu metụtara nhọpụta Pololikashvili n'etiti nsogbu ndị ọzọ. Onye ahọpụtara, Zurab Polokishvili, agwaghị otu ahụ otu ọ chọrọ ịchị.
- Naanị tinye: Gịnị kpatara ya? Maka onye nnọchi anya gọọmentị nke nwere oge "mmezigharị ya meghere ụzọ maka ọrụ njegharị na-aga n'ihu na Georgia na atụmatụ mbelata ịda ogbenye," ọ ga-enwerịrị ike ịma otu esi ekwu echiche ya.
Gini mere eji ahoputa ndi n’emeghi ihe nlere anya n’onodu njem nlegha anya ka ha nochitere anya Georgia na UNWTO mgbe enwere otutu ndi nwere ike ighota?
-Nke a bụ mmekọrịta chiri anya Pololikashvili na praịm minista Georgia ma ọ bụ na-eche na ọ bụ onye kacha nwee ikike na Georgia dabere na iru eru ya naanị?
-Gịnị mere na ọ nweghị onye Jọọji nwere ezigbo asambodo na-enyo enyo nhọpụta ya? Ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka mkparị nye ndị nọ na Ministri nke Njem Nleta ma ọ bụ Ofesi.
Georgia mere otutu quid pro quo backroom amụọ n'oge usoro nhọpụta.
-Gịnị ka ọ na-ere ere na onye ya na ya?
-Nke Pololikashvili kpebiri inye ndị otu UNWTO kansul otu ngọngọ nke tiketi iji ree egwuregwu May 10th Real Madrid omume rụrụ arụ ọ dị ka ọ bụ mkpebi enweghị oke na oge nke Pololikashvili?
Enweghị ezigbo azịza nye ajụjụ a. Nwoke ririla ọkwa ọchịchị n’obodo atọ dị na Jọjia enweghị ike ikwu na ọ bụ onye ọchịchị.
- Gini bu nkowa nke Pololikashvili na gini kpatara na ogaghi enye ndi oru nta akuko?
-Pololikashvili ịgbachi nkịtị n'okwu a na-eme ka echiche nke ikpe mara, n'agbanyeghị eziokwu ahụ. Ya ma ọ bụ ogige ya aghọtaghị mgbasa ozi zuru oke iji wepụta nkwupụta, ọ na-echeghị, ma ọ bụ na ọ bụ ihe ọzọ na-egwu egwu?
Gini mere na ndi ndu UNWTO enweghi mkparita uka na nkparita uka banyere iru eru ndi mmeri?
-O meela ka ahọpụta nwa akwukwo nwere ezigbo nzere ma nwee aha ka ga-emebi?
Isi okwu si na Ajụjụ ọnụ
(Ahapụla ndị a gbara ajụjụ ọnụ maka ihe doro anya.)
Site na otu onye otu UNM nọ n'ọkwa dị elu nke nọrọ kemgbe iri afọ iteghete:
“Zura bụ otu n’ime ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Georgia nke ọ na-adịghị onye ọ bụla nwere obi ilu megide. Ọ lanarịrị na 2012 [mgbanwe ike ya] kama nke ọma, ma enwere ndị nọ n'ogige abụọ nke UNM nke gbasasịrị wee were ya dị ka enyi. "
Site na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Georgia, onye bụbu onye omeiwu, onye bụbu onye isi nke IRI na Iraq, na onye ndụmọdụ mbụ na Yuschenko (onye bụbu onye isi ala Ukraine) onye maara Georgia na 2000s dịka onye ọ bụla ọzọ na onye na-emegide Saakashvili:
“Ọ bụ nna ya chịkọtara akụ̀ na ụba Pololikashvili, onye bụ ọchụnta ego a ma ama na onye na-aga mmekọrịta enyi na udo na Soviet Georgia, ọkachasị n'oge ọchịchị Shevardnadze. Zura n'onwe ya bụ ezigbo nwa nke gere nna ya ntị. Nke ahụ bụ ebe ọ nwetara amamihe ya na amamihe ya maka mkparịta ụka. Ọ bụ nwoke nke zuru oke. ”
Site n'aka onye ọka iwu ama ama nke mesoro ezinụlọ Pololikashvili n'oge gara aga:
Ezigbo aha na-ada n'ezinụlọ — ọ na-abụkarị akụkụ nke ndị a ma ama. Pololikashvili, Onye isi, bụ otu n'ime ndị ọchụnta ego na ọbụna Shevardnadze enweghị ihe ọ bụla megide. -Ndị bara ọgaranya, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ụzọ posh. ”
Site na onye nta akụkọ na-enweghị aha:
“Pololikashvili nwere aha na-enweghị ntụpọ. Ọ bụ onye maara ihe na onye maara ihe nke na-adịghị emegide mmadụ ọ bụla. ”
Site na enyi nke onye bụbu onye isi nke National Bank of Georgia:
“Ọ dị nwute — ụdị onye ọ na-adịghị onye na-emegide ma ọ bụ na-emegide ya. Ọ bụ ee-nwoke n'oge ọ nọ na TBC [ụlọ akụ nke o nyere aka kee] yana n'oge ọ bụ minista. "